Mogadishu Journal » Maxkamadda ICJ oo muddo labo bilood dib u dhigtay dhageysiga Kiiska Badda
Mjournal :-Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda Adduunka ICJ ayaa ku dhawaaqday in muddo labo bilood dib loo dhigay dhageysiga dacwadda Badda ee u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Go’aanka Maxkamadda ayaa ka dambeeyay, kaddib markii Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwada oo loo balansanaa 9-ka bishan oo ku beegan Isniinta soo socota.
Safiirka Soomaaliya u fadhiga Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay in sida Kenya ay dalbatay oo ahaa in Dacwada dib loo dhigo 12 bilood aysan Makamaddu ku raacin, dhageysiga dacwada dib loo dhigay 2 bilood oo kaliya.
Dhageysiga Kiiska Badda ayaa la qorsheeyay inay dhacdo horaanta bisha November ee sanadkan 2019.
Kenya ayaa maalmihii u dambeeyay waday marmarsiyo ku aadan in kiiska dacwadda Badda dib loogu dhigo, inta ay Qarreeno cusub ka soo magacaabaneyso, kaddib markii ay kala dirtay kuwii hore.
Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid ay dooneysay inay Kenya ku joojiso fashilka iyo guuldarada ay kala kulmi laheyd dhageysiga dacwada Badda ee qorsheysnaa inuu dhaco 9-13-ka bishan September.
Shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo ka socda Dhuusamareeb